म ब्रश कसरी सफा गर्छन्? combs र हेरविचार को प्रकार
Comb बाल - आत्म-हेरविचार लागि सबैभन्दा लोकप्रिय सहायक, हरेक घर मा उपलब्ध छ जो। तपाईं यो गरेर हैरानी हुन सक्छ, तर सबै नै: "तिमी बाल अधिकार combing लागि व्यवस्था को हेरविचार कसरी लिन थाहा छ?" विशेष गरी तपाईं को लागि हामी घर मा कोर्नु वा ब्रश मालिश सफा कसरी सबै भन्दा राम्रो सुझाव संकलन गरेका छन्।
प्रत्येक आफ्नो हेरविचार आवश्यकता comb
बाल लागि Combs आकार, आकार र गन्तव्य मा फरक हुन्छन्। निश्चय पनि लाउने तालिका मा धेरै महिला केही फरक ब्रश र combs छ। सहज मालिश कोर्नु बाक्लो कपाल र जरा, राउन्ड पैकिंग मा बेबदल तिनीहरूलाई लिफ्ट, र मध्य र व्यक्तिगत किसिमहरु को जुदाई सिर्जना लागि पतली उपयुक्त। तपाईं कोर्नु सफा गर्ने बारे विचार गर्नु अघि, तपाईंले यसको आकार, तर पनि यो बनेको छ जो देखि सामाग्री मात्र छैन ध्यान गर्नुपर्छ। अक्सर, बिक्री कपाल को हेरविचार लागि प्लास्टिक, धातु र काठ सामान पाउन सकिन्छ। यसलाई नियमित सफाई कुनै पनि कोर्नु आवश्यक बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। भद्दा देखिने दूषण हटाउन संग सुरु सफाई: शासन, सबै ब्रश गर्न साधारण सम्झना। या त एक दांत कोट्याउने सिन्का प्रयोग गरेर वा स्वयं राम्ररी हराएको कपाल र धूलो हटाउन। त्यसपछि मात्र तपाईं सफाई र लुगा धुने उत्पादनहरु सोझै जान सक्नुहुन्छ।
कपाल को हेरविचार लागि प्लास्टिक र धातु उत्पादन धुन
प्लास्टिक - यो व्यापक सानो घरेलू सामान सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ कि कम से कम Moody र सस्ता सामाग्री छ। अक्सर यो बनेको छ र व्यावसायिक combs, सौंदर्य सैलून मा प्रयोग गरिन्छ जो छ। बाल सामान को सफाई लुगा धुने सुरु गर्नुपर्छ। को श्रोणि Soapy पानी तयार र तरल अमोनिया को एक चमचा थप्न (सिरका वा साइट्रिक एसिड प्रतिस्थापन गर्न सक्छ)। कोर्नु एक घण्टा परिणाम समाधान मा प्लास्टिक को गरे भिजेको। यो समय पछि, एउटा पुरानो टूथब्रश संग सफा बाल सामान, त्यसपछि सफा पानी प्रशस्त साथ कुल्ला। को वर्णन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्लास्टिक उत्पादन हेरचाह गर्न अनुकूल छ, र धातु को गरे कोर्नु कसरी सफा गर्ने? वास्तवमा हेरविचार को नियम यस्तै, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, भिजेको छैन5भन्दा बढी मिनेट छन् धातु बाल सामान। तपाईं एक धातु कोर्नु नयाँ जस्तो चाहनुहुन्छ भने, अल्छी राम्रो उनको सोडा RUB छैन। शुद्धीकरण अन्तिम चरण - सुखाने। प्लास्टिक combs कोठा तापमान मा सुकेको गर्न सकिन्छ, र धातु एक हट प्याक वा जेट ड्रायर मा राख्न राम्रो छ।
प्राकृतिक सामाग्री बनेको combs लागि नाजुक सफाई
सबैभन्दा हेरविचार को मांग एक काठ बाल ब्रश छ। पानी जस्तै combs संग धुन मात्र धेरै भारी माटो हटाउने लागि सिफारिस गरिएको छ। नियमित सेनेटरी सफाई संग (, पानी को 1 लीटर साढे पाउच पतला) साइट्रिक एसिड समाधान प्रयोग वा रक्सीको भन्दा राम्रो छ। एक कपास swab वा मखमल टुक्रा राम्ररी सतह सफा गर्न एक कोर्नु सबै देखिने माटो हटाउन, र त्यसपछि। यो एक कोर्नु सबै दाँत, र तिनीहरूलाई बीच अन्तरालहरू व्यवहार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। ड्राई काठ कोर्नु मात्र गर्मी स्रोतबाट टाढा, कोठा तापमान मा हुन सक्छ। प्राकृतिक चम्किलोपन संग उत्तिकै picky हेरविचार ब्रश। प्रदूषण रूपमा आफ्नो तटस्थ डिटर्जेंट वा स्याम्पु गुणवत्ता संग धुनु सिफारिस गरिएको। कुनै 15 भन्दा बढी मिनेटसम्म Soapy पानी बलियो दूषण यी combs भिजेको। को चम्किलोपन कपाल र ठूलो धूलो कणहरु विश्वास गुमाउन भने, प्रत्येक बीम प्लास्टिक कोर्नु वा टूथब्रश comb।
मसाज ब्रश कसरी सफा गर्ने?
मालिश एक नायलन वा रबर आवेषण संलग्न छन् दाँत जो volumetric combs, भनिन्छ। सामान्यतया, यी किनभने जटिल आकार को ब्रश सफा गर्न सबैभन्दा गाह्रो छन्। जब यसको निर्माण लागि प्रयोग प्रधान सामाग्री द्वारा निर्देशित दूषण देखि combs सफाई को एक विधि छनौट। काठ आधार ब्रश र दाँत साथै साफ गर्नुपर्छ बाल सामान, सम्पूर्ण काठ बनेको छ। तर प्लास्टिक बनेको हेरविचार combs धेरै सजिलो छ। एक साबुन समाधान तिनीहरूलाई भिजेको र त्यसपछि राम्ररी टूथब्रश सफा। अन्यथा तपाईं कोर्नु तोड्न पनि कठिन दाँत र संलग्न को स्थान RUB छैन। मसाज ब्रश हेरचाह गर्न सबैभन्दा गाह्रो - राम्ररी उत्पादन सफाई पछि सुकेको। एक तौलिया मा कोर्नु दाँत तल राख्न र पूर्ण सुक्खामा छोड्नुहोस्।
Disinfection बाल सामान
नियमित disinfection मात्र व्यावसायिक combs, तर घरमा प्रयोग ब्रश गर्न आवश्यक छ। यो अन्य व्यक्ति फाइदा लिए पछि आफ्नो कोर्नु व्यवहार गर्न समय लिनुहोस्। यसलाई समय समयमा, बाहिर disinfection र कारण बिना पूरा गर्न उपयोगी छ। सजिलो तरिका - यो औषधि पसल मा एक विशेष सार्वभौमिक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने किन्न र यसलाई मा कोर्नु भिजेको गर्न, निर्देशन पालना गर्नुहोस्। प्रश्न बारे चिन्तित जिम्मेवार धेरै Housewives: "को ब्रश कसरी» उत्कृष्ट घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने गुण सफा र एकै समयमा कीटाणुरहित र एक लाँड्री साबुन को एक रक्सी समाधान छ गर्न। तपाईंले यी क्लीनर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं थप निस्संक्रामक उपचार चिन्ता गर्न सक्दैन।
प्रत्येक दिनको लागि उपयोगी आशय
धेरै राम्रो बानी - एक हप्ताको कम्तिमा एक पटक घरमा सबै combs सफा गर्न। मलाई विश्वास छ, यो कुनै कम खर्चिलो शैंपू र मायालु को अन्य साधन खरीद भन्दा आफ्नो बाल को सौन्दर्य र स्वास्थ्य मा एक महत्वपूर्ण लगानी छ। प्रत्येक प्रयोग पछि बाल नष्ट भएको ब्रश हटाउन। लागि बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले एक पटक हरेक 3-4 महिना भन्दा कम प्राय दिनहुँ प्रयोग गरिन्छ जो परिवर्तन combs, सुझाव दिन्छौं। तपाईं एक हाते झोला मा एक टूथब्रश बोक्न भने, यो सुरक्षा मामला मा राख्न निश्चित हुन। एक भाँचिएको कोर्नु कहिल्यै प्रयोग गर्नुहोस्। एक भाँचिएको आवास वा ह्यान्डल, खस्यो दाँत संग सुरक्षा सुझावहरू नष्ट - एक बाल सहायक तुरुन्तै वेवास्ता हुनुपर्छ। यी सरल नियमहरू पालन र बाल ब्रश सौन्दर्य र स्वास्थ्य कर्ल लागि संघर्ष तपाईंको विश्वसनीय सहायक हुनेछ।
पुरुष ब्रीफकेस छाला बनेको - समाजमा धन र स्थिति को प्रतीक
आधुनिक विद्युतीय घडी: एक विस्तृत श्रृंखला, असीमित सम्भावनाहरू
बच्चाहरु पौडी खेल्न लागि जैकेट आफ्नो बच्चाको लागि आवश्यक छ!
तेल कूलर - आफ्नो घर मा सधैं न्यानो मौसम!
कसरी डिस्क आफैलाई फाइलहरू बाल्न
बाल "Schwarzkopf" को लागि तेल: सुविधाहरू, प्रकार, संरचना र समीक्षा
दोस्रो विवाह: यो अब र सुखी पछिल्लो हुनेछ कि
सस्तो लुगा किन्न धेरै विकल्पहरू
मानसिक गणना। मानसिक गणना - 1 वर्ग। मानसिक गणना - ग्रेड 4
इस्राएलका लेकिमिया कस्तो छ?
Humidor - यो के हो? सिगार भण्डारणको लागि एक कन्टेनर कसरी चयन गर्न
राज्य विरुद्ध अपराध: अवधारणा, प्रकार, विशेषताहरु
वाल्व सभा: काम सिद्धान्त र क्षेत्रीय